Nakidzwa nemutambo weOverwatch paLinux uchibatsirwa neWinepak | Linux Vakapindwa muropa
Nakidzwa nemutambo weOverwatch paLinux uchibatsirwa neWinepak
Con kusvika kwezvikumbiro kuburikidza neWinepak, akasiyana mafomu atanga kugoverwa atinogona kunakidzwa pane edu masisitimu, tisingafanire kutendeukira kune yechinyakare kumisikidza Waini uye zvakare kumisa iyo kuti ienderere mberi kuisa yedu application.
Ichi chiyero cheWinepak mapakeji Yakafarirwa nevazhinji nekuti inoita kuti basa rekumisikidza rive nyore, pamwe nekuchengetedza mushandisi nguva yakawanda mairi.
Muchinyorwa che nhasi tichagovana newe nzira yakapusa yekumisikidza mutambo weOverwatch pane yedu system nerubatsiro rweWinepak.
Nekushandisa nzira iyi tinogona kunakidzwa nemutambo mukuru uyu pane edu masisitimu.
Kune avo vashandisi vasingazive uyu mutambo unozivikanwa ini ndinogona kukuudza izvozvo Overwatch mutambi wevazhinji munhu wekutanga kupfura vhidhiyo mutambo, Yakagadzirwa neBlizzard Varaidzo.
1 Nezve Overwatch
2 Maitiro ekuisa Overwatch paLinux?
Overwatch inoisa vatambi muzvikwata zvevatanhatu, nemunhu wega wega achisarudza rimwe remagamba anoverengeka aripo rimwe nerimwe rine rakasarudzika kufamba uye kugona. Magamba akapatsanurwa kuita makirasi mana: Kurwisa, Dziviriro, Tangi, uye Tsigiro.
Vatambi vechikwata chega chega vanoshanda pamwechete kurwisa uye kudzivirira nzvimbo dzekutonga kana kurwisa / kudzivirira "mhosva" (kufambisa zvibodzwa zvinotenderera mepu).
Vatambi vane mutambo wega wega vanounganidza mapoinzi anovapa mibairo yekushongedza iyo isingakanganisa mashandiro emutambo.
Kupedza mamamepu emitambo akafemerwa nenzvimbo chaidzo dzenyika. Semuenzaniso, mepu nhatu dzekutanga dzakaratidzwa ("King's Walk", "Hanamura", "Tembere yeAnubis") yakafemerwa neLondon, Japan, nematongo eEgypt yekare, zvichiteerana.
Kuwedzeredza kunoonekwa nekuva nehondo dzechikwata umo zvikwata zviviri zvevatambi vatanhatu zvinotarisana.Vatambi vanosarudza gamba kubva kune aripo mavara. Parizvino mutambo une mana makuru mutambo modes.
Kurwisa: Chinangwa cheboka rinorwisa ndechekutora zvinangwa zvakakosha, nepo timu inodzivirira iri yekuvachengeta pasi pesimba ravo kusvikira nguva yapera.
Kupfura murindi: Chinangwa cheboka rinorwisa kuendesa mutoro kunzvimbo yekuendesa. Dare rinodzivirira rinofanira kukanganisa kufambira mberi kwevamwe kusvika nguva yapera.
Kudzora: Zvikwata zviviri zvinorwa kuti zvibate uye zvibate chinangwa chimwe chete panguva. Wokutanga kuhwina maround maviri anokunda mutambo.
Kurwiswa / Escort: Chinangwa cheboka rinorwisa ndechekutora nhumbi wozoiendesa kunzvimbo yekutakura. Dare rinodzivirira rinofanira kukanganisa kufambira mberi kwavo.
Yemakwikwi: Iyi yemutambo modhi inotora iyo yapfuura mutambo modes uko kune inorwisa timu uye inodzivirira timu, maviri maround akaitwa achichinjisa iro basa rechikwata, kuhwina timu iyo yakatungamira yakanyatsoita kufambira mberi kwechinangwa.
Arcadian: Kune akatiwandei asiri makuru mutambo modes anopa mibairo imwe neimwe nhamba yekukunda uye zvakare kuwedzera ruzivo. Iyo mitambo inosanganisira mitambo inokurumidza iyo yakagadzirisa zvinhu.
Maitiro ekuisa Overwatch paLinux?
Sezvatinotaura tinogona kuisa uyu mutambo mune yedu system nerubatsiro rweWinepak, nekuti izvi zvinodikanwa kuti isu tive nerutsigiro rweFlatpak tekinoroji mumasisitimu edu.
Tisati tadaro, isu tinofanirwa kuve nemavhidhiyo dhiraivha emakadhi edu emifananidzo mune ino system.
Unogona kushanyira chero ezvinyorwa zvandakambogovera zve kuisa vatyairi veNvidia o AMD madhiraivha.
Kuisa Overwatch pane yedu system, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye nekuteedzera unotevera kuraira mairi:
Tichafanirwa kumirira kuti package iitwe pasi uye iiswe pakombuta yedu. Pakupera kwekumisikidza tinogona kumhanya mutambo pane yedu system.
Kuti umhanye mutambo uyu kana nzira yawo pfupi isati yagadzirwa mumamenyu ekushandisa, tinogona kuimhanya ne:
Mukutanga kuurayiwa, Waini ichagadziriswa, pamwe nemutambo muhurongwa, saka kana mubatsiri achitida, isu tinongofanirwa kuteedzera kuraira kwavo.
Pakupera kwemaitiro aya tinokwanisa kumhanya uye kunakidzwa nemutambo pachirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Nakidzwa nemutambo weOverwatch paLinux uchibatsirwa neWinepak
Iyi Winepak inoita senge inonakidza kwandiri mukufamba kwenguva, ikozvino, ndinofunga kuti kune mamwe marudzi ekushandisa senge mitambo yemavhidhiyo, haina kunyatso "shanda" kutaura.
Kutarisa kune iyo yekuisa faira https://github.com/winepak/applications/blob/master/com.blizzard.Overwatch/com.blizzard.Overwatch.yml Iwe unogona kuona kuti iyo vhezheni yeWini staging iyo inokuisa iwe ndeye 3.9 kana isu tatova pa 3.12 kuti kana ini ndisina kukanganisa pane imwe gadziriso yeOverwatch, zvakare hapana chirevo chero kupi kuDXVK, saka ndinofungidzira kuti iyi Winepak inoshandisa iyo yemuno vhezheni yeDX11 iyo Waini yakabatanidzwa, apo iyo DXVK dura yakaratidza kuve nekuwanda kwakawanda kuita. Ini pachangu ndinotamba OW neDXVK uye ini ndine Nvidia 960 uye ini ndinotamba pakati pe100-120fps yakanyatso gadzikana uye ichikakama mahara. Ndine chokwadi chekuti neiyi Winepak, sekuratidzwa kwazvinoitwa, haipfuure 60fps mukuwedzera pakuve nekukakama kunotsamwisa.
Kana iwe uchida kutamba Overwatch nemazvo, ini pachangu handikurudzire ino system, zvirinani kwete izvozvi (pamwe mumwedzi mishoma ichave yave nani).
Ini ndinokurudzira kushandisa iyo Lutris chikuva uye kudzidza kutamba madiki paramita anoenderana neyako system, nekuti muLinux haina kufanana kushandisa AMD saNvidia, panogona kuve nemisiyano muzvirongwa zvinogona kukanganisa mashandiro emitambo yedu mune inoonekwa. nzira.
Maitiro ekutamba Minecraft paGNU / Linux
Fanatical's Strategy Kutengesa kunowanikwa kweLinux mitambo yemavhidhiyo